लकडाउनबाट मुक्त हुन १ वर्ष लाग्न सक्छः इजरायली प्रधानमन्त्री,अनि तपाईं के भन्नुहुन्छ नी? – मेचीमहाकाली डट नेट NEWS
लकडाउनबाट मुक्त हुन १ वर्ष लाग्न सक्छः इजरायली प्रधानमन्त्री,अनि तपाईं के भन्नुहुन्छ नी?
इजरायलमा कोभिड–१९ नियन्त्रणका लागि लिइएका नियन्त्रण उपायका कारण अर्थतन्त्रमा व्यापक प्रभाव परेको छ । इजरायलको झण्डै एक चौँथाइ अर्थात् नौ लाख श्रमशक्ति कोरोनाका कारण बेरोजगार बनेको इजरायली रोजगार सेवा केन्द्रद्वारा सार्वजनिक तथ्याङ्कमा उल्लेख छ । रातो पाटि बाट
Previous कसले गर्यो रुसले बनाएको साढे दुई करोड डोज कोरोनाको खोप नेपाल ल्याउने सम्झौता ?,हेर्नुहोस।
Next कोरोनालाई “चाईनिज भाईरस” संज्ञा दिने अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्प अस्पताल भर्ना,के भन्नुहुन्छ नी?
मि’र्गौला दिएर मृ’त्युको मुखबाट बचाएको प्रेमिकाले जब बिहे गर्न नमानेपछि…